Isihloko sethu lunikezelwe cleaner amaphampu, izinhlobo zazo kanye nezindawo isicelo. Lolu lwazi kuyoba usizo noma ubani ecabanga ukuthi kungenzeka ukwenza leli thuluzi ngokwakho.
Wonke umuntu uyazi ukuthi futha enjalo, futhi cishe wonke umuntu esetshenziswa ngezinhloso siqu. Kodwa nge simo cleaner futha kuhlukile kancane. Abaningi bakubheka njengodumo noma insimbi ethile, tibuye obusetshenziswa embonini. Ngakho-ke, ngenxa ongelutho elula, lolu lwazi akubonakali ezithakazelisayo. Naphezu kwakho konke lokhu, futha cleaner for uzotshala air muhle kakhulu ukusetshenziswa siqu, kodwa kukhona okuningi okunjalo imishini. Ukuze ukusetshenziswa ekhaya amanani ezinjalo ezingafanelekile, ngakho abaningi ngokuvamile kuphakama umbuzo: indlela yokwenza futha cleaner for uzotshala emoyeni ngezandla zabo?
Kungani isidingo futha cleaner
Uyakuqonda ukukhiqizwa kwe-futha cleaner, kubalulekile ukuqonda ngokucacile ukuthi kuyini, ngoba womshini iyunithi efana kuzothatha isikhathi, imizamo kanye nemali.
Abantu abaningi bayazi ukuthi emaphaketheni cleaner. Kubukeka sengathi ngoplastiki, lapho kukhona valve. Ngosizo imikhiqizo yakhe agcinwa kahle, walondoloza ukudla kwehlobo, kanye imikhiqizo musa Ewufrathe out banganamukeli ukuzalela amagciwane. emoyeni nje extruded kusukela bakudala kakhulu cleaner emasakeni, kodwa amaphakheji eziyinkimbinkimbi - isethi cleaner futha sisetshenziswa. Ngakho, ukukhiqizwa kwanoma kudivayisi ezenziwe ekhaya ivumela ukumpompa emoyeni aphume noma iyiphi iphakheji, kodwa kuyodingeka ukuqinisekisa ubuqotho iphasela enjalo.
Umshini emaphaketheni uphelele ukugcina izingubo, ngoba ngezinye izikhathi encishisiwe umthamo yayo. Lokhu kujabulisa ikakhulukazi uma udinga ukulingana izinto ipotimende noma esikhwameni.
Labo wenza imikhiqizo izinkuni, bazi ukuthi ukuba bafake ukubukeka ekhangayo, kubalulekile ukuba impregnate ke ngamafutha. Ukuze luhambe ngokushesha uhlelo le nqubo, kanye nokusebenza ngendlela enkulu nje ngamafutha ekamelweni cleaner. Ngakho, layo langaphakathi ingcindezi ugodo ukumpintsha phandle emoyeni futhi zimunce amafutha.
Aphathwayo cleaner futha ngoba batakulana moya ukumpompa out uketshezi kodwa hhayi ngqo kodwa nokusetshenziswa ezengeziwe owamukelayo futhi isitsha ekhethekile.
Izinhlobo amaphampu okuzenzela
Amaphampu kungaba ezahlukene, konke kuncike nokusetshenziswa okuhlosiwe.
I futha elula ubhekwa isipetu wezokwelapha. Nokho, ingasetshenziswa ukwakha cleaner izinto eziningi ezincane kakhulu. Kodwa ezingabizi kakhulu, futhi uma indlu akuyona ke akunankinga ungathenga kunoma iyiphi ekhemisi, okubaluleke kakhulu, banake ubukhulu.
Zikagesi njengoba cleaner futha ngoba batakulana emoyeni kungenzeka ekhiqizwa kusuka ezivamile futha yezimoto.
Ukuze cleaner ngaphezulu ungenza lithathelwe compressor ifriji. Futhi le njongo ngeke asondele eguquliwe aquarium compressor.
Ukulungiswa imoto futha
Homemade cleaner futha ekuphileni kwansuku zonke kulula ukwenza imoto noma ibhayisikili amaphampu, olutholakalayo amapulazi ezithile.
Lezi zinyathelo silula:
kuqala okudingeka uyenze ukuliqaqa futha, uyasikrufulula cap intambo, okuyinto phezulu emkhonweni;
ukususa piston futhi ususe iringi ukubekwa uphawu kusukela stem (ngoba lokhu kuyadingeka ukuze uyasikrufulula screw akhiwe phakathi);
inverting O-ring nge screwing emuva ku stem;
Nge imisebenzi elula esinjalo etholwe idivayisi kudala cleaner okuncane izigubhu kanye nomqulu omncane. Kodwa futha cleaner omunye umphini isheke.
Hlola valve for okuzenzela cleaner futha ungakwazi ukuthenga esitolo, okuyinto uthengisa nemishini okugcinwa. Lena plastic ingxenye engabizi isethelwe compressor Aquarian. Mhlawumbe kusukela kubangani noma nengangibajwayele abe compressor eziphukile. Nge-valve isheke kuleli cala lutho okwenzekayo (ngoba akukho ukuphula). Ngakho, kungenzeka ukuthola futhi unikeze ekhaya ezenziwe yethu cleaner futha for uzotshala air.
Valve iqinile ngendlela ukuvulwa okhethekile zedivayisi, kanye tube elikulo, okuholela emgqonyeni. Yiqiniso, kumelwe into nesikhathi esifanele - udinga ukuvumela emoyeni lasakazeka lisuka kumuntu isitsha ku futha. Ukuze uhlole isiqondiso okusebenzela valve ngaphambi uyifake, kubalulekile ukuba nishaye air ngesikhathi esifanayo angadluleli, kuzosho ukuthi ekupheleni valve enamathiselwe futha. Uma ngabe into qualitative, futhi enkompolo inhlukano uphawu ngokucophelela, ngokusebenzisa isandla cleaner futha anganikeza asalile cleaner ingcindezi ukuze mbar 200.
Ukukhiqizwa kwe-futha cleaner nge compressor
A futha amancane cleaner for uzotshala air akakwazi ukuxazulula zonke izinkinga. Ukuze udale cleaner ephakeme noma ukumpompa out lemiqulu emikhulu emoyeni, ofanele ukuba ngisebenzise isifutho se-kagesi enophephela. Ukuze isidingo sakhe ukwenza noma yiluphi compressor yasendlini.
Sebenza at kancane: ngamapayipi lapho umoya ukusivumela, unamathele okokufaka insimbi (ngaphambi kubalulekile ukususa ukuhlunga). Ngemva tube isananyathiselwe, ungafaka compressor.
Uma ugcwalisa isitsha nemikhiqizo ewuketshezi noma ephezulu umswakama emoyeni, okuyinto akhishwa, sizoqukatha umhwamuko inqwaba. Ngaphansi kwezimo ezinjalo compressor Ngeke ukwazi ukusebenza isikhathi eside. Ukuze ugweme compressor ukuwohloka livelile ohlelweni Kufanele amanzi nokupakisha, lapho kukhona umamukeli kanye sump.
Umshini futha for uzotshala air, wenza esiqandisini
Household compressor akuyona njalo ngakwesokunene, ukuze ukwazi ukusizakala supercharger ngobugebengu ifriji amayunithi noma emoyeni isimo.
futha cleaner okunjalo oluqanjwe indlela elandelayo:
kufanele uthathe ngokudla ngamapayipi hacksaw zethusi, lapho ijoyina compressor kuya epholisayo kanye evaporator;
lapha kubalulekile ukuba banake kahle kanjani compressor ixhunywe kwamandla kanye edluliselwe uma wire ixhunyiwe kahle, kanye compressor akuyona nje engathandi ukusebenza, kodwa kungase futhi zingahambi kahle;
ke phezu Scrap zethusi udinga ukugqoka iraba-ngendwangu hose kanye ixhume isitsha cleaner;
Manje ungakwazi ukuxhuma compressor kunethiwekhi.
Yiqiniso, ezenziwe ekhaya endlini compressor wayengekho enamandla kakhulu, kodwa njengoba futha cleaner ngoba batakulana emoyeni kusukela iphakheji ngempela okungahambi kahle, futhi eziyisisekelo imisebenzi yasendlini kuyenziwa.
Kungenzeka kanjani ukuthi ngibe ukuguqula aquarium compressor
A futha cleaner ngoba batakulana emoyeni kusukela namakani tingentiwa kusukela compressor aquarium okuyinto sesivele eshiwo ngenhla. Kuyinto samuntu ngempela esisebenzayo. Lo mklamo ayidingi ngcono sina, kudingeka sivele ushintsho oluncane look wakhe:
ahlole ngokucophelela compressor bese uqale ukulungisa izakhi;
nokususa kubo ukwenza Ukudilizwa isheke valve;
emva ukususwa valve, kufanele kuyolungiswa;
ukuqoqa umkhiqizo, unamathisele tube ukuba isitsha cleaner futhi iqale ukusebenza.
Ukuvimbela umswakama wangena compressor, le condensate kungaba okuphumayo ngokusebenzisa izimbobo ezincane sikebhe.
ukuhluleka olungenzeka futha cleaner
- motor engesiyo noma uxhumano ayilungile.
- Ukwephula actuator ngokuvumelana shaft futhi ukudonsa indlela.
- Jamming yelunga ezisebenza elihambayo.
- Ukulimala amabombo e amayunithi ukwesekwa.
- Ukubukeka ukugqwala phezu izakhi ukusebenza.
- okweqile we futha bafake okwalandela izingxenye.
- okweqile noma ukuvuza ezindaweni zokusebenzela.
Umshini futha for uzotshala air, kanye nanoma yimuphi omunye indlela naphula noma behluleka. Ukuhluleka ezivamile siye engenhla, futhi manje udinga ukuthola indlela yokulungisa kubo:
motor engesiyo noma uxhumano ayilungile. Okuvame kakhulu iphutha - ukuphulwa kwe-circuit uxhumano. Ekuqaleni, udinga ukuhlola amandla, okungukuthi, ubuqotho intambo. Lokhu kuzodinga inkomba uphenyo. Uma uphenyo ngeke kukhanye izinhlansi, futhi ngemva powering motor iwaphe- ke ukwehluleka akunjalo. Uma kungenjalo, kusho ukuthi ukwehluleka injini, ke kuyodingeka ukuthi bakhokhe ukuze kulungiswe.
Ukwephulwa kwedivayisi idrayivu shaft kanye ukulethwa indlela. Le nkinga ivame ixazululwe ngokufaka ukuqondiswa ngaphansi motor noma indlela ukutjhatjhululwa. Uma ngemva kwalokho ukusebenza futha akuyona liqale, kubalulekile ukuhlola bamba for ukuguquguquka noma ukusonteka. Kulokhu, into efakwa endaweni noma zishintshwe.
Jamming yelunga ezisebenza indlela elihambayo. Ngokuvamile, le nkinga kwenzeka ngenxa ukungcoliswa medium akhishwa. Ukuze kuxazululwe le nkinga kubalulekile ahlukanisa umkhiqizo futhi ihlanzekile.
Zokugwema ukuphuka ebizwa ISIZINDA ukwesekwa. Le nkinga kuhambisana umsindo vibration eqinile. Lokhu kusho ukuthi sihlobene uhlulekile futhi kumelwe ithathelwe.
isikali ukubukeka emsebenzini izinto. Le nkinga ngokuvamile kwenzeka ku ketshezi indandatho futha, lapho medium ukusebenza - amanzi. Ukuze labagula iyunithi ukuqeda usawoti ezifakwa yenziwe ngohlobo olukhethekile.
Pump okweqile kanye okwalandela bafake izingxenye. Le nkinga ngokukhethekile ukuze ahlekise uwoyela-free-rotary vane yesifunda. Ngisho ngezinto zokwakha zesimanje kakhulu, ezifana Teflon, azikwazi nxephezela ngokugcwele ngenxa yokuntuleka Lubrication. Ngakho-ke, kubalulekile ukuba bagcine umbuso lokushisa. Nokho, uma okweqile kwenzeka, izingxenye ezilimele kufanele kuthathelwe indawo.
Okweqile noma ukuvuza ezindaweni zokusebenzela. Uma uketshezi indandatho futha uye awukhiqizi zabo, kubalulekile ukuhlola umfutho we uketshezi inkonzo. It ungawa ngenxa ukuvuza yayo. Isixazululo esikhundleni uphawu ku kwathela.
Uma uphawu isesimweni esihle, ngakho-ke, uma uxhumano flanged - kukhona kudingeka esikhundleni gasket.
Njengoba uketshezi ukugeleza rate kungenzeka ngenxa yokuguga esindayo futhi izinyembezi. ngokuvamile Lokhu kwenzeka uma futha usekhonze kakade kokwakhe, idinga ukushintshwa noma ukuqinisekisa iyunithi, kungase kudingeke maintainable ngaphezulu, futhi kufanele zishintshwe kuphela izingxenye bakhathale.
Ngezinye ophezulu inkonzo imvelo, ngenxa idivayisi yayo ngokweqile noma okweqile nabo bangahamba okungalungile. Uma usetha inani elilungile, futha izosebenza esihle futhi. Uma isimo lokushisa siyenzeka, kubalulekile ukubambezela ukugeleza kwamanzi noma ukumboza valve emgqeni khulula.
Amawashi zabesifazane (Switzerland): izibuyekezo, izithombe
Juicer "Dewdrop": imanyuwali yomsebenzisi, i-review
Lapho bafundzi bacala gulit? Sifunda!
Burgernye Petersburg: uhlu kwezithombe ezihamba phambili kanye nokubuyekeza
Encephalitis Japanese: izimpawu, inkampani, lokugoma
Bobani ababhalisile "In Touch"? Kanjani ukuze iyithole?
Anapa ezinkampanini ezizimele kanye swimming pool, ulwandle ehlanzekile amabhishi engapheli - ngakho libukeka real ngamaholidi